Ugwaza umngane kubangwa ama-sms | uMthunywa
Ugwaza umngane kubangwa ama-sms
10 Jan, 2019 - 00:01 2019-01-09T17:57:56+00:00 2019-01-10T00:02:46+00:00 0 Views
uSithandazile Moyo lo Petronella Sibanda
KULENINA lesigabeni seBubi eNyathi eligwaze umngane walo ngeviki ephelileyo ngemva kokuba libone incwajana zothando kumakhalekhukhwini wakhe abezibhalelana lomkakhe.
USithandazile Moyo ugwaze umngane wakhe uPetronella Sibanda kabili esiswini kanye laseqolo ngemva kokuba enanzelele ukuthi uPetronella uthandana lomkakhe.
Umfakazi ongathandanga ukuvezwa ngegama ubike ukuthi uPetronella uvele uyaziwa ngokuchitha imizi esigabeni.
“UPetronella uselodumo lokuchitha imizi yabantu, khathesi kukhanya wenzele umuntu ongayisuye ngoba ethandane lendoda yomngane wakhe okuyikho okubangele ukuthi acine emgwaza,” kuchaza umfakazi oqotho lo.
Kubikwa uPetronella wagwazwa kabili ngemva kokuxabana loSithandazile, ngemva kwalokhu wagijinyiselwa esibhedlela seNyathi ukuyakwelatshwa.
Intatheli yephephandaba ixhumane loPetronella yena obike ukuthi umngane wakhe umqambela amanga ngoba ethi indoda yakhe yiyo eyaqala ukumkhombisa.
“Yimi engilimeleyo kulindaba, umngane wami ucabanga ukuthi bengifuna ukumthathela indoda kodwa umkakhe nguye obefuna ukulala lami. Kangizange ngenelise ukumtshela ngoba bekuzamzwisa ubuhlungu njalo khathesi ubungane bethu sebuqedwe zindaba ezingela msebenzi,” kuchaza uPetronella.
Imizamo yokukhulumisana loSithandazile yehlule ngoba kubikwa wahle wanyamalala ngemva kokugwaza umngane wakhe ngoba esesaba ukubotshwa.
Isihlobo esiseduze loSithandazile sibike ukuthi imuli yabo ilokudana ngokwenziwe nguSithandazile.
“Loba kuthiwa ubezondile ngokwenziwe ngumngane wakhe kodwa ukumgwaza bekungayisilo cebo elihle ngoba sesehlise isithunzi kubomakhelwane. Sicela ukuthi abantu abazambona bazise amapholisa,” kuphetha isihlobo lesi esingathandanga ukuqanjwa ngebizo.
Kasekho uDumiso Dabengwa23 May, 2019
Bangcwaba isidumbu lenja ephilayo. . .be...23 May, 2019
Hwatshu undofa eqhiyile embhedeni kasobh...23 May, 2019